​सनराइज बैंकको शाखारहित बैङ्किङ सेवा डाँगीहाटमा
काठमाडौं । सनराइज बैङ्क लिमिटेडले डाँगीहाट–६ मोरङमा शाखारहित बैङ्किङ सेवा सञ्चालन गरेको छ । बैङ्किङ सेवा नपुगेका स्थानमा बैङ्किङ सेवा पु¥याउने उद्देश्यले बैङ्कले यो सेवा सञ्चालन गरेको बताएको छ । मङ्गलवार..
यती डेभलपमेण्ट बैंकको ‘यती अनमोल बचत’ योजना, वार्षिक ६ प्रतिशत व्याज
काठमाडौं । यती डेभलपमेण्ट बैङ्कले नयाँ बचत योजना ल्याएको छ । बुधवारदेखि लागू हुने गरी बेङ्कले ‘यती अनमोल बचत योजना’ सार्वजनिक गरेको हो । यो योजनामा वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याज..
​नेपाल एसबिआई बैंकको जनचेतनामुलक साइकल र्‍याली
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैङ्कले आफ्नो नियमित बैङ्किङ अभ्यास प्रबद्र्घन तथा बैङ्किङ सचेतना कार्यक्रम अन्तरगत शनिबार साइकल र्‍यालीको आयोजना गरेको छ । कार्यक्रम बैङ्कको केशरमहल स्थित कार्यालयबाट शुरु भई राजधानीका विभिन्न..
​किन बैङ्कहरुले गुठी जग्गालाई धितोमा राख्दैनन् ?
काठमाडौं । कृषिको व्यावसायीक आर्जनबाट जीवन चलाउने इच्छा राखेका बच्चु ढकालको सपना अधूरो बनेको छ । अविछिन्न भोगचलन गर्दे आएको जग्गा बैङ्कले धितो लिन नमानेपछि ढकालको सपना चकनाचुर बनेको हो..
स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले शुरु गर्यो अटोमेटेड चेक डिपोजिटको सुविधासहित वाइफाई जोन
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंकले लाजिम्पाट शाखाबाट अत्याधुनिक सेवा सुरुवात गरेको छ। गएको बर्ष भूकम्पले भवनलाई क्षति गरेपछि ग्राकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पुरानो भवनबाट नयाँ भवनमा सरेको बैंकले जनाएको छ। लाजिम्पाट..
बैंकिङ्ग क्षेत्र पारदर्शी भए जनताको विश्वास बढ्छ
काठमाडौं । बैंक क्षेत्र पारदर्शी भए मात्र जनताको विश्वास बढ्ने सरोकार भएकाहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘सूचनाको हक सम्बन्धमा बैंकिङ क्षेत्रको..
बाग्लुङ्गको गल्कोटमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ९१ औँ शाखा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले शुक्रबार बाग्लुङ्ग जिल्लाको गल्कोटमा आफ्नो नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ। उक्त शाखाको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले उद्धघाटन गरे। शाखा उद्घाटन समारोहमा बैंकका..
​नेपाल लाइफको २५ प्रतिशत बोनश पारित, दश प्रतिशत एफपिओ जारी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभाले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव स्वीकृति गरेको छ । कम्पनीको १६ औं वार्षिक साधारण सभाले बोनश प्रस्तावका साथै बोनशपछि दश प्रतिशत..
पोखराको गरिमा विकास बैंकले नम्बर वान बन्ने भन्दै काठमाण्डौंमा शाखा खोल्यो
काठमाडौं । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गरिमा विकास बैंकले पहाडदेखि तराईसम्म, शहरदेखि गाउँसम्म भन्ने नाराका साथ काठमाण्डौंको सामाखुसीमा २७ औं शाखा बिस्तार गरेको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बिच नेपाल राष्ट्र..
​जनता बैंकले १ अर्ब ३ करोड रुपैयाको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने, पुँजी ३ अर्ब ९ करोड पुग्ने
काठमाडौं । जनता बैंकले चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत अर्थात् दुई बराबर एकको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि बैंकले पुँजी बढाउन हकप्रद..
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले निष्काशन गर्ने ३० प्रतिशत हकप्रद शेयरको लागि बिक्री प्रबन्धकको रुपमा सिभिल क्यापिटलसँग सम्झौता गरेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले हालै जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार बैंकले इक्रा..
​सनराईज बैंक र नारायणी नेशनलको मर्जका लागि विशेष साधारणसभा जेठ २० मा
काठमाडौं । सनराईज बैंकले लिमिटेडले आगामी जेठ २० गते विशेष साधारणसभा गर्ने भएको छ । राजधानीको कालिस्थानस्थित अमृतभोग क्याटरिङमा हुने सभाले नारायाणी नेशनल फाइनान्सलाई एक्विजिशन गर्ने निर्णय गर्ने बैंकले जनाएको..
​पश्चिम विकट गाउँमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बै‌ंक र सक्षम संस्थाबीच संझौता
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैैंक र सक्षम एक्सेस टु फाईनान्स कार्यक्रमबीच सुदुर र मध्य पश्चिममा वित्तीय सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ । यी दुई सस्थाबीच बुधबार वित्तीय सेवा विस्तार..
​जनकपुरको सहयोगी र सर्लाहीको सहारा बिकास बैंक पनि गाभिने, पूँजि ३२ करोड पुग्ने
काठमाडौं । सहयोगी बिकास बैंक र सहारा बिकास बैंक एकआपसमा गाभिने भएका छन् । यी दुई बैंक गाभिएपछि नयाँ बन्ने बैंक सहयोगि विकास बैंकको नामबाट संचालनमा आउने छ भने तीन..
​के भाँडिन लागे कै हो ? एनसीसी र कुमारी लगायतका बैंकको मर्ज प्रक्रिया
काठमाडौं । निकै तामझामका साथ वित्तीय बजारमा मर्जको हल्ला गरिएको एनसीसी बैंक र अन्य आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको मर्जको प्रक्रिया अबरुद्ध बनेको छ । तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रवद्र्धकहरू लक्ष्मी..
​राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ९ महिनामा १ अर्ब ६१ करोड कमायो, निक्षेप १ खर्ब ३० अर्ब संकलन
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ८ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको बैंकले खुद मुनाफा १ अर्ब ६१ करोड ९६ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ जुन गत वर्षको तुलना भन्दा ६०..
​प्रभु बैंकले थाल्यो बिहानी सेवा, निक्षेप संकलन र चेक सटही हुने
काठमाडौं । प्रभु बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा गत आइतबारदेखि बिहानी सेवा सुरु गरेको छ। ग्राहकको सुविधालाई ध्यानमा राखी मुख्य शाखा कार्यालय बबरमहलबाट प्रभातकालीन (बिहानी) काउण्टर सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको..
​एकै पटक ९ वटा बैंक, फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको स्वीकृति दियो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नौं वटा बैंक वित्तीय सस्थालाई मर्जरको अनुमति दिएको छ । राष्ट्रको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले मर्जर र एक्विजिसनको अनुमति दिएको हो । राष्ट्र बैंकले पाँच वटा..
​गरिमाको २६ औं शाखा स्याङ्जाको चापाकोटमा, काठमाडौंमा पनि छिट्टै खोल्ने
काठमाडौं । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गरिमा विकास बैंकले स्याङ्जाको चापाकोटमा आफ्नो २६औं शाखा खोलेको छ । उक्त शाखाको सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक चिरन्जीबी चापागाईले उद्घाटन गरे । बैंकले चापाकोट..
​एनआईसी एशिया बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा लक्ष्मण रिसाल नियुक्त
काठमाडौं । एन आई सी एशिया यस बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा लक्ष्मण रिसाल नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले रिसाललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको बैंकले जनाएको छ..
कुमारी बैंकको खुद मुनाफामा ४१ प्रतिशतले बृद्धि, ९ महिनामा साढे ३५ करोड रुपैयाँ कमायो
काठमाडौं । कुमारी बैंकले तेस्रो त्रैमासमा खुद मुनाफा गत बर्षको तुलना भन्दा ४१ दशमलव ०३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ भने गत बर्षको..
​धरहरा बनाउन एसबीआर्इ बैंकले ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ दियो
काठमाडौं । विनाशकारी भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि नेपाल एसवीआइ बैंकले ५ करोडभन्दा बढिको सहयोग गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर बैंकका पदाधिकारीले ५ करोड २१ लाख रुपैयाँको चेक..
​हाम्रो विकास बैंकको मर्ज प्रस्ताव बिशेष साधारण सभाबाट अस्वीकृत
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक र हाम्रो विकास बैंकबीचको मर्जर तोडिएको छ । हाम्रो विकास बैंकको शुक्रबार नुवाकोटमा सम्पन्न विषेश साधारण सभाले ज्योतिसँग मर्ज हुने प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको हो । साधारण..
ज्योति बैंकसँग हाम्रो र झिमरुक विकास बैंक गाभिने प्रस्ताव पारित
काडमाडौं । ज्योति विकास बैंकको आर्थिक बर्ष २०७२-७३ को विशेष साधरण सभा काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको छ । उक्त विशेष साधरण सभाले ज्योति विकास बैंक लि, हाम्रो विकास बैंक लि र..
​ग्राण्ड बैंकलाई गाभेपछि प्रभु बैंकको ९ महिनाको नाफा ७५ करोड रुपैया
काठमाडौं । ग्राण्ड बैंक र प्रभु बैंकले प्रभु बैंकको नाममा संयुक्त कारोबारपछि पहिलो त्रैमास अर्थात बर्ष आर्थिक तेश्रो त्रैमासमा प्रभु बैंकको खुद नाफा ३५ करोडले बढेको छ । ग्राण्डलाई गाभ्नुअघि दोस्रो..
धनकुटाको हिले बजारमा माछापुच्छ्रे बैंकको ७२ औं एटीएम
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले धनकुटाको हिले बजारमा एटीएम सेवा सुरु गरेको छ । बैंकको यो ७२ औ एटीएम सेवा हो । बैंकले शुक्रबार देखि संचालनमा ल्याएको उक्त एटीएम बुथबाट..
बैंक अफ काठमाडौले किन बढाउन सकेन मुनाफा ?
काठमाडौं । बैंक अफ काठमाडौको प्रगति केही बर्ष यता सुस्त रहेकोमा यस बर्षको तेस्रो त्रैमासमा पनि मााथि उठ्न सकेन । बैंकको खुद नाफा स्थिर रहनुका साथै निस्क्रिय कर्जा अनुपात बढ्ेको..
रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकले ९ महिनामा ९ करोड रुपैयाँ कमायो
कठमाडौं । रिलायबल डेभलपमेन्ट बैंकको ७१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्ममा खुद मुनाफा २२ दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि गरी ९ करोड १० लाख रुपैयाँ कमाएको..
सेञ्चुरी बैंक र ट्रान्स-फास्ट रेमिटबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड र ट्रान्स-फास्ट रेमिट्बीच रेमिट्यान्स सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरु वा बैंकको एजेन्टहरुबाट ट्रान्स-फास्ट रेमिट्बाट पठाएको पैसाको भुक्तानी लिन सकिने..
​जनता बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सम्झौता गर्यो
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडले जनता बैंकसँग अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीका लागि सम्झौता गरेको छ ।सम्झौतापत्रमा नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान र जनता बैंकका प्रमुख..
Results 1896: You are at page 36 of 64